ဒီကာလမှာ ဆေးကုသဖို့ ဆေးဖိုးဝါးခ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ rider တစ်ယောက်အတွက် ဝိုင်းပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် | Su See Yar - Maynmar's first crowdfunding platform
ဒီကာလမှာ ဆေးကုသဖို့ ဆေးဖိုးဝါးခ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ rider တစ်ယောက်အတွက် ဝိုင်းပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ပင်မစာမျက်နှာ / ဒီကာလမှာ ဆေးကုသဖို့ ဆေးဖိုးဝါးခ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ rider တစ်ယောက်အတွက် ဝိုင်းပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ကျွန်တော်နာမည်က ထွန်းမင်းလတ်ပါ။ Foodpanda မှာလုပ်တဲ့ rider တယောက်ပါ။ လုပ်သက်က၁နှစ်ကျော်ကျော်ရှိပါပြီ ID နံပါတ်က 322815ပါ လောလောဆယ် ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအခြေအနေက တော်တော်ဆိုးလာနေလို့ အလုပ်နားထားရတာ ၁လကျော်ကျော်ရှိပါပြီ။ အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ် ရောဂါကိုခံစားနေရတာပါ ဆေးကုသဖို့ကလည်း အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါ။ လောလောဆယ် အသဲအထူးကုနဲ့ မပြသနိုင်သေးပါဘူး ဒီကာလမှာ ဆေးရုံတင်ခွင့်မရဘူး အမှတ်(၂)စစ်ဆေးရုံမှာပါ ကုတင် တောင်ပြည့်လို့ ကြမ်းပြင်မှာပဲဆေးသွင်းရတယ်။ လတ်တလောတော့ စစ်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကညွှန်းတဲ့ ဆေးတွေ ဝယ်သောက်နေရတာပါ။ ၁၀ရက်စာကို ၆သောင်းလောက်ကုန်ပါတယ်။ မိသားစုသုံးယောက်ပါ ၉နှစ်အရွယ် သမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့ အိမ်ကလဲ ငှားပြီးနေနေတာပါ တလခြောက်သောင်း ပေးနေရပါတယ်။ အရင်ကမိန်းမကလဲ delivery လုပ်ပါတယ် ကျွန်တော့်လိုတော့မဟုတ်ဘူး သူက
online shop တွေကအပ်တာကို လိုက်ပို့တာပါ။ အခုကတော့ ကျွန်တော်ကို ပြုစုနေရတော့ အလုပ်နားနေရတယ်။ ဒီချိန်က အလုပ်လဲပါးပါတယ်။ လောလောဆယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
လက်ရှိနေနေတာက သင်္ဘောကျင်းအိမ်ရာဝင်း၊ ကမာရွတ် (၄)ရပ်ကွက်မှာနေပါတယ်။
ဆေးကုသဖို့ ဆေးဖိုးဝါးခ အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါအုံး ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးပြန်ပြီး ကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ကားမောင်းလိုင်စင်လဲရှိတော့ စပေါ်လေးတင်ပြီး Taxi လေးမောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ စက်ဘီးကတော့ ပြန်မနင်းနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ် စကားပြောရင်တောင် မောမောနေတာဆိုတော့ အဲ့အလုပ်ကပြန်လုပ်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူး။
ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်လဲဖြစ်တယ်၊ မိသားစုစားဝတ်နေရေးဖူလုံဖို့ နဲ့ ကျွန်တော့်သမီးလေးရဲ့ နောင်ရေး ပညာရေးအနာဂတ်ကောင်းစေဖို့အတွက် ကျွန်တော့်မှာ တာဝန်အပြည့်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံရှာဖို့ အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ကျန်းမာရေးကိုအမြန်ကောင်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုလို အလှုခံနေနေရတာကိုပဲ လူကြီးမင်းတို့ကို အားလဲအားနာ၊ ရှက်လဲရှက်မိပါတယ်။ တကယ်ကို မတတ်နိုင်လွန်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း သမီးလေးအတွက်၊ မိသားစုအတွက် ဆေးကုပြီး ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီး အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်လို့သာ အကူအညီတောင်း အလှုခံနေရတာပါခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးကို ဒီတသက်မမေ့ပါဘူးခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က 09762298881 ပါ။ ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကျန်းမာရေးအခြေနေ အသေးစိပ်ကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို ဝိုင်းပြီးအလှုခံကူညီပေးနေတဲ့ စုစည်းရာကတဆင့် ငွေလွှဲပြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါခင်ဗျာ။
KBZ Pay Account / 09251926616 (Su See Yar)
Wave Money Account / 09251926616 (Aluto Benli)
Su See Yar Page link ကတဆင့်loginဝင်ရောက်ပြီး Local MPU၊ Visa/Master Cardများဖြင့်လည်း လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
Nyein Nyein Thu
Myat Lay Nwe
Kaung Wai Yan (Facebook Name)
U YD Mark (Facebook Name)
Koko Lintun (Facebook Name)
Ma Aye Aye Khine
Mon Mon Min
Pan Ei Khine
Aye Zan Zan Win
Wai Mon Thu
Sai Myat Min
Nwe (Facebook Name)
Khaing Pyae (Facebook Name)
Kit Kit (Facebook Name)
Bae Lal Hming Thaung (Facebook Name)
Kalayar Myo Tint
Donars Part 1
Donars Part 2
Donars Part 3
8.5L MMK Funded
2.4L MMK Goal
Htun Min Lat
5,000 MMK (ဘယ်လောက်ပမာဏပဲလှုလှု အဲ့ဒီကူညီလှုဒါန်းမှုကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရော facebook, emailရောသိပ်မသုံးတတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လွှာနဲ့ အလှုငွေတွေအသုံးပြုထားတဲ့မှတ်တမ်း ကို campaignြပီးသွားရင် Su See Yar pageမှတဆင့်‌ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ)
10,000 MMK (ဘယ်လောက်ပမာဏပဲလှုလှု အဲ့ဒီကူညီလှုဒါန်းမှုကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရော facebook, emailရောသိပ်မသုံးတတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လွှာနဲ့ အလှုငွေတွေအသုံးပြုထားတဲ့မှတ်တမ်း ကို campaignြပီးသွားရင် Su See Yar pageမှတဆင့်‌ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ)
20,000 MMK (ဘယ်လောက်ပမာဏပဲလှုလှု အဲ့ဒီကူညီလှုဒါန်းမှုကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရော facebook, emailရောသိပ်မသုံးတတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လွှာနဲ့ အလှုငွေတွေအသုံးပြုထားတဲ့မှတ်တမ်း ကို campaignြပီးသွားရင် Su See Yar pageမှတဆင့်‌ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ)
30,000 MMK (ဘယ်လောက်ပမာဏပဲလှုလှု အဲ့ဒီကူညီလှုဒါန်းမှုကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရော facebook, emailရောသိပ်မသုံးတတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လွှာနဲ့ အလှုငွေတွေအသုံးပြုထားတဲ့မှတ်တမ်း ကို campaignြပီးသွားရင် Su See Yar pageမှတဆင့်‌ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ)
50,000 MMK (ဘယ်လောက်ပမာဏပဲလှုလှု အဲ့ဒီကူညီလှုဒါန်းမှုကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရော facebook, emailရောသိပ်မသုံးတတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လွှာနဲ့ အလှုငွေတွေအသုံးပြုထားတဲ့မှတ်တမ်း ကို campaignြပီးသွားရင် Su See Yar pageမှတဆင့်‌ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ)
100,000 MMK (ဘယ်လောက်ပမာဏပဲလှုလှု အဲ့ဒီကူညီလှုဒါန်းမှုကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ရော facebook, emailရောသိပ်မသုံးတတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လွှာနဲ့ အလှုငွေတွေအသုံးပြုထားတဲ့မှတ်တမ်း ကို campaignြပီးသွားရင် Su See Yar page မှတဆင့်‌ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ)
Su See Yar has builtaplatform focused on aiding entrepreneurs, startups, and companies raise capital from anyone.
JLPT ကိုအထူးပြုသည့် ideal course ကို online မှာ ပြုလုပ်ချင်တယ်!
မြန်မာ​နိုင်ငံ​နှင့် ဂျပန်​နိုင်ငံ​ကို ဆက်သွယ်ပေးမဲ့ Idol audition ကိုပြုလုပ်ချင်ပါတယ်!​